DF oo Dhuusamareeb ka tarxiishay siyaasigii ugu horeeyey oo ka aragti duwan | Caasimada Online
Home Warar DF oo Dhuusamareeb ka tarxiishay siyaasigii ugu horeeyey oo ka aragti duwan
DF oo Dhuusamareeb ka tarxiishay siyaasigii ugu horeeyey oo ka aragti duwan
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Sheekh Cumar Mahad-Alle oo tirsanaa baalamaankii labaad ee Galmudug ayaa laga soo tarxiilay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug.
Sheekh Cumar ayaa maalmo ka hor ciidamada dowladda ee ka howlgala Dhuusamareeb waxay ka soo qabteen Hotel uu ka deganaa magaalada, iyadoo wixii intaas ka dambeeyanaya lagu hayey guri ku yaalla magaalada.
Siyaasigaan oo u waramay Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sababta loogu xiray gurigaas waxa uu ku sheegay in lagu eedeeyay inuu ka mid noqon rabay xubno baarlamaan oo ay Ahlu-Sunna dhismahooda ka waday magaalada Dhuusamareeb.
Sidoo kale Sheekh Cumar ayaa sheegay intii uu ku xirnaa gurigaas in loo soo bandhigay inuu iskaga tago magaaladaan, maadaama ay madaxda dowladda federaalka dhibsadeen hadallo uu warbaahinta u mariyey.
Mahad-Alle ayaa sheegay in muddo kadib uu ogolaaday inuu iskaga baxo magaalada Dhuusamareeb, sidaasna maanta duhurkii Muqdisho looga dejiyey.
Sheekh Cumar Mahad Alle ayaa sheegay in dowladdu ay caburin ka wado magaalada Dhuusamareeb, isla markaana il gooni ah ay ku heyso cid kasta oo dhaliilsan sida ay wax ku wado, sida uu aaminsana hayna maalmaha soo socda dad kale laga soo tarxiili doono.